China Bottom mutengo China North America Hot Sale otomatiki Yakazara Kudzima magetsi Multi Span Cannabis Mwenje DEP Greenhouse-PBMG001 fekitari uye bhizimisi | Aixiang
Gothic Rudzi Multi Span
Kudzima magetsi Greenhouse （Chiedza Kubvisa Greenhouse）
1.Aixiang inogadzira mamiriro akakura ekukura nekugadzira maturusi ayo anokohwa zvizere kukura uye anobatanidza masisitimu ekugadzirisa mamiriro ekunze kuti ave nechokwadi chegoho repamusoro uye mhando yepamusoro, pamutengo wakaderera wekushanda.
2.Tave parizvino takabatana nevakawanda varikugadzira mwenje vanogadzira vagadziri kuti vagadzire yakagadzirirwa mwenje mhinduro kune akasiyana maronda ezvirimwa, kusanganisira mwenje weLED pamwe neHigh Pressure Sodium mwenje neMetal Halide mwenje. Isu tinobatanidza izvi netekinoroji yedu yekubvisa mwenje kuti tione kuti mbeu yako yezvirimwa inowana mwero chaiwo wechiedza wainoda kuti mbesa dzikure zvakanaka.
3.Chiedza-chinobvisa maturusi ari kuda kupisa kukuru uye kutonhora kuchengetedza yakatsiga tembiricha yehutano kukura kwemiti. Isu tinogadzira yepamusoro-mashandiro, akaomeswa magirinhi ekuderedza kushandiswa kwesimba uye kukura gore rese. Yedu greenhouse kits inokonzeresa kune inoenderera, yakasikwa yakawanda nharaunda ine yakaderera mashandiro emari uye kuwedzera kugadzirwa.
Mashoko Hot Akanyika kwakakurudzira Steel pamwe zingi zvemapuranga 275gsm
Kubatsira Yakakwira uye kunyange yakapenya hutachiwana, Hupenyu hwakareba uye hwakanyanya kusimba
Yakasimba ngura kuramba uye moto kuramba
Zvakanaka zvekupisa zvekushisa.
Yemazuva ano uye yakashongedzwa dhizaini
Mutoro wemhepo 0.5KN / m2
Mutoro wechando 0.35KN / m2
Max. Kudzinga kugona kwemvura 120mm / h (maminetsi mashanu nenguva)
Greenhouse mune yakajairwa mutoro kugona greenhouse mune yakajairwa mutoro kugona
Chifukidzo cheGreenhouse Roof-4,5.6,8,10mm imwe chete girazi rakadzikama girazi
4-mativi akakomberedza: 4m + 9A + 4,5 + 6A + 5 isina girazi
Greenhouse shandisa kureba kwenguva 9.6m / 10.8m / 12m
Greenhouse shandisa eaves kukwirira 2.5m-7m
Nezve AX Kusviba Greenhouse
Nzvimbo dzekuchengetera magetsi kudzima, pahwaro hwetsika dzekuchengetera.
Pahwaro hwetaneru girinihausi, PC greenhouse uye girazi girinihausi, ichiwedzera yemukati shading system ndiyo yakapfava kudzima magetsi ekuti greenhouse.
Semuenzaniso, iyo yekufukidza zvinhu zvemugero greenhouse inoshandurwa kuita dema firimu, inova yema blackout greenhouse.
Kubatsira kweichi greenhouse ndechekuti mutengo wakadzikira kwazvo, asi chakakanganisika ndechekuti haigone kunzvesa mvura panodiwa mweya kana mwenje wechisikigo.
Naizvozvo, kuitira kuti basa re greenhouse riwedzere kukwana.
Blackout greenhouse ndiyo nzira huru yekuwedzera yemukati shading system kune greenhouse.
Panguva imwecheteyo, isu tinowedzerawo kukura mwenje system, kudziyisa sisitimu, kufefetedza uye kutonhora system, carbon dioxide jenareta, mweya kutenderera system, nezvimwe.
Kuitira kuti nzvimbo yekukura kwezvirimwa iwedzere kudzora.
Pafungidziro yemusangano wekudyara zvido. Isu takaunganidza data pane greenhouse chimiro. Panguva imwecheteyo, pasi pekutonga kwenzvimbo yegreenhouse, isu takaunganidzawo data rekukura kwezvirimwa.
Iyo yekuvhara zvinhu zvinoenderana neyakavakirwa hwaro hwekusviba girinihausi.
Tunnel kudzima magetsi ekuputira-kupisa: Firimu, PC Bhodhi
Venlo Greenhouse-Inovhara Chinyorwa: Girazi, PC Bhodhi
Nezve Girazi Zvinhu
Feature: guruva-chiratidzo, yakakwira mwenje kutumira, kwakanaka kuputira mashandiro, Anti-mhute kudonha, hupenyu hwakareba hurefu
Ukobvu: Girazi rakadzikama: 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm.etc, // Hollow girazi: 5mm + 8 + 5mm, 5mm + 12 + 5mm, 6mm + 6 + 6mm, 6mm + 12 + 6mm, nezvimwe.
Kutenderera: 82% -99%
Tembiricha renji: Kubva -40 ℃ kusvika -60 ℃
Nezve Polycarbonate pani
Kuita kwakanaka kwekuisa,
Guruva-chiratidzo uye mhute-chiratidzo,
About Firimu Dema
Ukobvu: 0.13 mm
Shading chiyero: 100% shading
Tensile Simba (Vertical uye yakatambarara): 35MPa / 35MPa
Elongation pazororo (Vertical uye yakatambarara): 800% / 1000%
Right kona kona kubvarura simba (Vertical uye yakatwasuka): 100kN / m / 110kN / m
Makuriro ekushandisa: Cannabis / meshroom / Kuchengetwa kwemhuka
Garandi: makore mashanu
Pashure: Mugadziri weChina Kupisa Kutengesa Kwekurima Vakaona Tooth Tunnel Greenhouse; Yekurima Greenhouse Plastiki Firimu Kavha-PTS001
Zvadaro: Europe dhizaini yeChina Zvekutengesa Imwe / Yakakura Span Chiedza Kubvisa magetsi erima Greenhouse yeHemp / Medical Herbs / Nursery-PBMV001
Cannabis Chiedza Kubvisa Greenhouse
Hemp Chiedza Kubvisa Greenhouse
Chiedza Kubvisa Greenhouse
2021 China AX Brand Oval Tube Mini Firimu Arch Tu ...
Factory Mutengo China Kwezvekurima / Zvekutengesa Chi ...
Wholesale OEM / ODM China Hemp Maruva Cbd Planti ...
Factory Price China Commercial girinihausi Poly ...
Yakazara Kudzima magetsi emagetsi Greenhouse Ine Multi-rukoko Mbeu ...